Nnwale Ihe Nlegharị Cross Mere Mfe | Martech Zone
Ọ bụrụ na ị na-na web mmepe ma ọ bụ web imewe, ị maara na otu n'ime ndị kasị akụda mmụọ aga-eme n'elu emecha a mara mma imewe na-n'ezie hụ na ọ na-arụ ọrụ gafee niile nchọgharị. Ọbụghị naanị na ihe nchọgharị na sistemụ arụmọrụ nwere ike ịmetụta oke otu peeji na-eme, yabụ plugins ị na-agba!
Anyị na-emepe saịtị maka VA mgbazinye ego Captain, onye zụtara isiokwu site na ndị ọzọ. Kama ịnwa ịkọ nkọ ma ọ ga - arụ ọrụ n'ofe ihe nchọgharị niile, sistemụ arụmọrụ na ngwaọrụ, anyị na - eburu ndenye mkpebi na ntọala nke ndabara. Nnwale Ihe nchọgharị Cross dọkpụrụ nseta ihuenyo ndụ! Ndị a bụ ụfọdụ ihe atụ:
Saịtị ahụ gụnyere ntinye mbadamba na mkpanaka! Ozugbo ị na-agba ọsọ ule ịchọrọ, Nnwale Ihe nchọgharị Cross na-enye gị URL nke ị nwere ike ịkekọrịta ozugbo na onye ahịa gị! Nke a na-achota na onye ahịa ahụ ghọtara nke ọma ma saịtị ahụ ezubere n'ofe niile na-ewu ewu nchọgharị ma ọ bụ, n'ihe banyere okwu mgbakwunye, na-enyere aka igosi ha na ọ bụghị ịme gị.
Ricnye ọnụahịa dabere na ọnụ ọgụgụ nke nkeji chọrọ iji ule gbaa. Ngwunye ngwugwu bu $ 19.95 kwa ọnwa - dị nnọọ ijide n'aka na ị amachi gị ule ndepụta mere na ị na-agba ọsọ nke nkeji kwa ngwa ngwa. Ọnwa mbụ m jiri ọrụ ahụ, ekwenyere m na m jiri ya ule ndabara ma gbaa m oge niile na ule di na nwunye nke edeputara otutu ego ngwaọrụ, sistemụ arụmọrụ, ihe nchọgharị na mkpebi!
Ihe na-erughị $ 20 kwa ọnwa, nke a bụ azịza dị egwu nke ga-eme ka ndị na-emepụta gị nwee ike nwalee na ngwaọrụ ọ bụla. Ọ bụrụ na ị bụ ụlọ ọrụ, ha ga-ahapụ gị ka ị soro ma hụ na atụmatụ gị na-akwado gafee niile isi nchọgharị na ngwaọrụ tupu izipu ụgwọ ikpeazụ ahụ!
Tags: nyocha nyochaobe nchọgharịNyocha nyocha ihe nchọgharị
Ọmarịcha nwelite maka gam akporo taa!